युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ?
किनकि हाम्रो समाजमा अहिले पनि त्यस्ता कपडा घाममा सुकाउन लाज माग्ने चलन छ । तर, त्यो कपडालाई हामीले निकै संवेदनशील अंगमा प्रयोग गर्ने भएकाले योनीमा संक्रमण भएमा त्यो सर्दै पाठेघरसम्म पुगेर समस्या विकराल बनाउन सक्छ ।
महिनावारी भएर अर्को महिना हुनेबीचको समयमा सेतोपानी बगेर कति महिला आत्तिएर आउँछन् । तर त्यो सामान्य हो, डराउनुपर्दैन, सबैलाई महिनावारीबिचको समयमा त्यस्तो हुन्छ । - डा अचला वैद्य, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ
12/16/2017 02:30:00 PM